Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo - Popular Jewelry
Miyaad samaysaa dahab qurxin qaabaysan?
Haa, waan qabannaa. Waxaan isticmaalnaa qalab tayo sare leh. Waxaan la shaqeyneynay macaamiisheenna si aan u qaabeyno una farsameyno qaybo gaar ah oo loo habeeyay muddo ku dhow 30 sano.
Ka raadi wax badan oo ku saabsan dahabka loo sameeyay dahabka ee Caanka ah.
Sideen ugu dhaqaaqi karaa amarrada xabbado cabitaanno ah ama ilig dahab ah?
Diyaar ma u tahay dhinacyada hore? NYC Waad booqan kartaa boggayaga u go'an si aad waxbadan uga ogaato ku saabsan sameynta waxyaabaha loo yaqaan 'grills' lagu sameeyay.
Ka raadi wax badan oo ku saabsan caadooyinka loo diyaariyo kala-soocidda at Popular Jewelry.
Waa maxay cabirkeygu?
Si aad u hesho fikrad ah sida ay dahabyadu u habboonaan karto, waxaad ka eegi kartaa tilmaamahaan cabbir ee noocyada dahabka ee kaladuwan:
Jijimado - Tilmaamaha Qiimeynta dharka lagu xidho (& Anjikooyinka sidoo kale!)
Qoorta - Xulashada ugu habboon qoortaada
Pendants - Xulashada gabal ku habboon oo loogu talagalay qoortaada
Rings - Xulashada cabirka saxda ah
Ma aqbashaa kaararka deynta?
Haa, waan aqbalnaa dhamaan kaararka deynta oo ay ku jiraan Visa, MasterCard, American Express iyo Discover. Intaas waxaa sii dheer waxaan aqbalnaa Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay, PayPal, iyo xitaa Bitcoin. Iyo haddii aad sidoo kale yaab lahayd, waxaan sidoo kale aqbalnaa wanaag wanaagsan 'moodada', lacag adag oo qabow. (Fadlan fadlan ha noo dirin.)
Waa maxay xulashooyinka kale ee lacag bixinta ee aad haysataa?
Waxaan aqbalnaa habab kala duwan oo lacag bixin ah sida PayPal Checkout, oo kuu oggolaan doonta inaad ku bixiso amarradaada dukaankayaga internetka iyo dukaankeenna jireed. Intaa waxaa sii dheer, waxaan aqbalnaa lacagaha NFC (Isgaarsiinta dhow) ee mobilada sida Apple Pay, Android Play iyo Samsung Play. Waxaan sidoo kale u soo bandhigeynaa macaamiisheenna ikhtiyaarka ah inay ku bixiyaan kaarar badan ama qaabab isku dhafan oo lacag bixin ah oo loogu talagalay iibsashada dukaanka. Waxaan sidoo kale aqbalnaa silig bangiga, jeega qasnajiga / shahaadada, iyo amarrada lacagta. Waqtiyada dheeraadka ah ee lacag bixinta ayaa lagu dabaqayaa qaababkan lacag bixinta. Intaas waxaa sii dheer, lacag bixintu waa inay cadeeysaa ka hor intaan badeecada la sii deyn ama loo dirin macaamilka.
Ma bixisaa qorshe layaway?
Haa, waan samaynaa Qorshayaashayaga dabacsanaanta dabacsan waxay u dhexeeyaan toddobaadle ilaa lacag bille ah waxayna leeyihiin 90 maalmood oo caadi ah. Haddii aad u baahan tahay waqtiyo lacag -bixin oo la habeeyay, fadlan nala soo xiriir.
Waqtigan xaadirka ah ma jirto hab si otomaatig ah loogu abuuro qorshe ka -qaadis iyada oo loo sii marayo degelkeenna. Waxaad u baahan doontaa inaad nala soo xiriirto via Iimayl (info@popular.jewelry) ama na siiso a wac +1 (212) 941-7942
Ma bixisaa maalgelin?
Talo bixin! (pun loogu talagalay) Waxaan aaminsanahay in dahabku aanu ahayn in la iibsado. Qiimaha dahabiga oo korodh joogto ah, waxaan had iyo jeer tusaalaynaa qaabab aan ugu qurxin karno dahabkayaga qaaliga ah qof walba. Marka laga reebo qorshayaashayada layaway ee dabacsan, iibsiyadaha internetka laga sameeyo ayaa lagu maalgelin karaa Xaqiiji iyo Gunnada Paypal, Iyo Zip (hore Quadpay). Marka laguu oggolaado khadka amaahda, waxaad ka eegi kartaa dukaankeenna onlaynka ah sida aad caadiyan ahaan lahayd oo xulashooyinka maaliyadeed ayaa laguu soo bandhigi doonaa.
Goorma ayaa amarkeygu imanayaa?
Sida shirkad kibir ku dhisan & fadhigeedu yahay New York, waxaan ognahay in macmiishayadu aysan had iyo jeer awoodin inay waqti badan ka bixiyaan jadwalka ay ka buuxaan si ay uga dukaameystaan ​​dukaankeenna. Isla mar ahaantaana, waxaan ognahay inay jeclaan lahaayeen ku habboonaanta in sidaas la yeelo meel kasta oo ay joogaan, iyo danayntooda ugu badan. Taasi waa sababta aan ugu dadaaleyno inaan u siino habsocodsiinta sida ugu dhaqsaha badan bani -aadamnimada - xaaladaha badankood, amarrada ay ku jiraan diyaar u ah inay xirtaan alaabada kaydka ah ayaa dhoofi doona isla maalinta shaqada. Waxaad si otomaatig ah u heli doontaa emaylka raadraaca gudbinta marka amarkaaga la hawlgeliyo oo diyaar u yahay shixnad.
Si aad u hesho faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan keenista, waxaad ku eegi kartaa siyaasadeena maraakiibta halkan.
Sideen ugu daryeelaa dahabkeyga?
Dhamaan iibsiyada dahabka ee wanaagsan ee laga iibsado Kuwa caanka ah waxay la yimaadaan cimri dherer nadiifin xirfadlayaal xirfadle ah oo dhammaystiran. Waxaan kugula talineynaa inaad ugu macquulsan jilicsanaanta dahabkaaga intii suurogal ah. Xaaladaha badankood, isticmaalka biyo diiran iyo saabuun khafiif ah ayaa ku filan inay nadiifiyaan dahabkaaga.
Halkan guji si aad u hesho hage qoto dheer oo ku saabsan dayactirka qurxinta qurxinta.
Ma dayactirtaa dahabka?
Haa, waan samaynaa Waxaan bixinnaa adeegyo dayactir ah qaybaha dahabka iyo lacagta ah ee dahabka ah. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad keento gabalkaaga burburay dukaankeenna waxaan ku dadaali doonnaa inaan hagaajinno sida ugu dhaqsaha badan. Sababtoo ah muggayaga shaqada oo sarreeya, fadlan u oggolow ugu yaraan 2-3 saacadood oo sugitaan ah adeegga dayactirka caadiga ah ee dahabka ee isla maalintaas haddii uu u qalmo. Wakhtiyada dhammaystirka shaqadu waxay ku xirnaan doontaa helitaanka qaybaha / qaybaha, kakan shaqada iyo mugga shaqada ee safka hore ugu jira.
Miyaad dayactirtaa saacadaha?
Haa, waan samaynnaa. Waxaan ku bixinnaa qayb dhan oo ah adeegyada saacadaha laga bilaabo isbeddelada batteriga joogtada ah illaa dayactirka dhaqaaqa farsamayaqaanka / hagaajinta. Xor baad u tahay inaad u keento saacaddaada qaaliga ah dukaankayaga si loo baaro iyo xigasho. Waxay noqon doontaa gacmo wanaagsan.
Iibsiyada la sameeyay jir ahaan dukaankayaga lagu keydiyo Siyaasadda Soo Celinta Dukaanka waxay khusaysaa oo waliba ku qoran risiidhada iibsashada:
Kaliya isweydaarsiga ayaa sida caadiga ah loo oggol yahay waana in lagu sameeyaa 7 maalmood gudahood marka la iibsado.
Iibsiyada lagu sameeyo bakhaarkeena internetka, waxaa lagu dabaqayaa Nidaamkeena Soocelinta Qadka. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan siyaasaddeena soo-noqoshada fadlan booqo Siyaasadda Diritaanka & Soo celinta .